Devanagari Newsबलियो नेपालबारे क्यानलाई इपिएलका अख्तरको प्रश्न — Devanagari News
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – एभरेष्ट प्रिमियर लिग (इपिएल) का संस्थापक आमिर अख्तरले गैर नाफामुलक अभियान बलियो नेपाल अभियानको कार्यक्रममा क्यान सदस्यसँगै कप्तान र खेलाडी आवद्ध भएपछि क्रिकेट संघ नेपाल (क्यान) ले यसबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का केन्द्रिय सदस्य छुम्बी लामासँगै नेपाली क्रिकेट टोलीका कप्तान एवं वर्तमान खेलाडीले एकै क्षेत्रमा सँगै उपस्थित हुन नहुने तर्क राख्दै क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, महसचिव अशोकनाथ प्याकुरेल, कोषाध्यक्ष रोशन बहादुर सिंह, क्रिकेट निर्देशक विनोद दस र प्रबन्ध निर्देशक रौनक मल्ललाई इमेल लेखेका छन् । उनले क्यानका सदस्य र खेलाडी एकसाथ अघि बढ्नुले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को अवस्था आएर आगमी दिनमा भ्रष्टाचारको सम्भावना बढाउने बताउँदै क्यानलाई छानविनको लागि आग्रह गरेका छन् ।
अख्तरले क्यानले आफूलाई जवाफ दिन नसके ४८ घण्टा भित्र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि यसबारे जानकारी दिने जनाएका छन् । उनले क्यानका केन्द्रिय सदस्य र कप्तान लगायतले प्रत्यक्ष रुपमा एकसाथ व्यापार गरिरहेको आरोप समेत लगाएका छन् । उनले निर्वाचनबाट आएका क्यानका सचिव र अध्यक्षलाई क्रिकेटलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने जिम्मेवारी रहेको भन्दै आफूलाई जवाफ दिन भनेका छन् ।
‘बोर्ड सदस्य भएपछि कुनै खेलाडीसँग व्यापार गर्न मिल्छ ? मैले क्यानसँग आधिकारी रुपमा प्रश्न गरेको छु । यदि क्यानले जवाफ दिन सक्दैन भने मैले भोलीको दिनमा यहि मेललाई आइसिसी र अख्तियारलाई फरवार्ड गर्छु’, अख्तरले हाम्रो खेलकुदसँग भने ।
‘फाउन्डेसन भन्नुस वा व्यापारिक संस्था भन्नुहोस् । खेलको संस्थामा कुनैपनि मिल्दैन । भोली फाउन्डेसनमा पैसा आउँछ । त्यो पैसा के गर्ने ? खेलाडी पनि छ क्यानको बोर्ड सदस्य पनि छ’, अख्तरले भने ।
अख्तरले इमेलमा बलियो नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रमको तस्बिर राख्दै त्यसमा कप्तानद्वय ज्ञानेन्द्र मल्ल र रुविना क्षेत्रीसँगै पूर्वकप्तान पारस खड्काको उपस्थिति रहेकोमा आपत्ति जनाएका हुन् । उक्त कार्यक्रम ‘के नेपाल सन् २०३९ सम्ममा क्रिकेट विश्वविजेता बन्न सक्छ?’ भन्ने विषयमा छलफल आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा सदस्य लामा र पूर्व क्रिकेटर तथा प्रशिक्षक शक्ति गौचनको पनि सहभागिता रहने जनाइएको थियो ।
विश्व खेलकुदमा कुनैपनि खेलाडी यस किसिमको संस्थाको लागि सद्भावना दुतका रुपमा कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आएका छन् । अझ कतिपय खेलाडीले आफ्नै फाउन्डेसन खोलेर पनि विभिन्न कार्यक्रम गरेको सर्वविदितै छ । अघिल्लो महिना मात्र नेपाली स्पिनर सन्दीप लामिछानेले आफ्नो ‘टिम सन्दिप लामिछाने’ अभियानमार्फत सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची क्षेत्रमा बाढी पिडितलाई राहत वितरण तथा निशुल्क स्वास्थ्य क्याम्प संचालन गरेका थिए । विश्व खेलकुदमा खेलाडीले सामाजिक कार्यमा संलग्न हुन विभिन्न फाउन्डेसनको साथ दिँदै आएका छन् ।